Andranomadio P/elle 11/43 Toamasina : Saron’ny zandary ny dimy tamin’ireo mpamaky trano enina… - Midi Madagasikara
DomicileFaits-DiversAndranomadio P/elle 11/43 Toamasina : Saron’ny zandary ny dimy tamin’ireo mpamaky trano...
Andranomadio P/elle 11/43 Toamasina : Saron’ny zandary ny dimy tamin’ireo mpamaky trano enina…
Voasambotry ny kompanian’ny zandary tarihin’ny kapiteny Joséphin Henistela, ny dimy tamin’ireo enina namaky trano tao Andranomadio P/elle 11/43. Raha iverenana dia tena mirongatra izay tsy izy ny asan-jiolahy ao amin’ity fokontany ity ankehitriny, ary efa voasokajin’ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana ho faritra mena ny ao Andranomadio P/elle 11/43.
Ny alin’ny 21 avrily teo tokony ho tamin’ny 1ora maraina dia nidiran’ny andian-jiolahy enina be izao izay samy nirongo fiadiana, ny efatra nihazona basy ary antsy be kosa ny an’ny ambiny roa ny tokantrano iray. Ity fianakaviana nidiran’ireto andian-jiolahy ity dia manao fivaratona enta-madinika sy mivarotra fahana na finday ary manao ireny fifanakalozana ara-bola amin’ny finday ireny koa. Raha ny fanazavan’ireo mpivady niharan’ny herisetra, vao tafiditra ireo andian-jiolahy enina ireto dia ny vola no notadiavin’izy ireo. Namoaka vola izahay saingy tsy neken’izy ireo fa kely hono, vokatra izany dia nandefa antsy teo amin’ny tratrako ny iray ka naratra ny tenako, saingy tsy nifarana teo fa narahina fira antsy tamin’ny lohako sy ny feko izany. Noho izany rehetra izany dia voatery navoakanay ny vola efa mba nafenina tany ambany fandriana, mitentina 1.400.000 ariary. Vao azony anefa ireo vola notadiaviny dia noraofiny avokoa ny finday rehetra tao an-trano niisa dimy.
Raha teo amin’ny paik’ady nahafahana nisambotra an’ireto jiolahy ireto, dia vokatry ny fiaraha-miasa matotra amin’ireo olon-tsotra sy rafi-piaraha-monina, raha niaraka tao amin’ny trano fisotroana iray ireto an-dian-jiolahy ireto niketrika famakiana trano hafa indray ihany koa, sy niresaka ny famakiana trano efa vita teo aloha. Teo no nisy nampandre ny zandary ary nanomboka teo ny fanaraha-maso azy ireo, ka noraisim-potsiny tao an-tokantrano iray ny dimy tamin’izy ireo. Tafaporitsaka kosa ny iray izay lehiben’ireto andian-jiolahy ireto izay mihazona ny fitaovam-piadiana fampiasan’izy ireo.